एक पटक ओशो आˆना शिष्यको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका थिए । उनले भने, ‘भर्खरै म एउटा गाउँमा थिए । केही विचारक तथा साधुसन्त मिलेर त्यहाँ अस्लील पोस्टर विरोधी सम्मेलन गरिरहेका थिए । उनीहरुको सोचाई छ, भित्तामा अस्लील पोस्टर लगाइन्छ, त्यसैले मासिनहरु कामवासनाबाट दिक्क हुन्छन् ।
यो माग कसरी पैदा भयो त ? त्यसलाई हामीले पैदा गर्‍यौंै । स्त्री-पुरुषलाई एक अर्काबाट टाढा राखेर हामीले त्यसको माग पैदा गर्‍यौं । त्यो मागलाई पूरा गर्न कुनै व्यक्ति जान्छ, हामीलाई लाग्छ, गलत भईरहेको छ । त्यसैले, बाधा खडा गरिन्छ । किनकी उसको बाटोमा जति धेरै अवरोध खडा भयो, आˆनो माग पूर्तिका लागि ऊ त्यति नै धेरै नयाँ नयाँ बाटो खोज्ा थाल्छ । किनकी मागले पूर्ति त खोज्छ ।
तपाईले पाँच सय व्यक्तिलाई देख्नु भएको छ, कसैले पनि चासो दिएका छैनन् । कसैलाई चासो राख्न जरुरी पनि छैन । किनकी यो उनीहरुको आˆनो कुरा हो । फेरी दुई व्यक्तिले यो उमेरमा एक अर्कालाई प्रेम गर्छन् भने पाप लाग्ने कुरा नै के छ ? र, यदी उनीहरुमा प्रेममा आँखा बन्द गरेर नजिक बस्छन् भने यसमा समस्या नै के छ ।